Ụzọ Ụzọ-Out-Of-The-Ụzọ Isi Meziwanye SEO Gị na Social Media - Ntuziaka site na ihe mgbochi
Ịchọrọ ịkwalite ogo gị na engines ọchụchọ?
Ị nwere mmasị iji mgbasa ozi ọha na eze mee ka ọrụ SEO gị dị elu?
Usoro mgbasa ozi nwere uru dị ukwuu na nchọta ọchụchọ gị, naisi ochichi nke ndi mmadu puru ime ka onodu ogugu di.
N'ime edemede ederede a, Jason Adler, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, na-enye ụzọ ise, site na nke a, ịnwere ike iji mgbasa ozi ọha na eze ka mma ịchọta ọkwa gị.
# 1: Mee njikọ na netwọk mmekọrịta gị
Na mbụ, ogo nke Google dabeere na njikọ njikọ n'agbanyeghị naụdị njikọ onye mmadụ na-atụle - best trading desktop computer. Ka oge na-aga, Google malitere ịtụle njikọ nke njikọ ahụ mgbe ọ ghọtara na ndị mmadụna-eduzi ogo site na iji njikọ adịgboroja.
Ebe ọ bụ na ebe nrụọrụ weebụ na-adabere na ikikere weebụ, njikọta na saịtị ndị a bụa na-elekarị anya dị ka àgwà dị elu. Ọbụna na ị nwere akwụkwọ Facebook ọhụrụ, ọ ga-abụrịrị na elu elu ruruIkike zuru oke Facebook.
# 2: Mee ka ọnụ ọgụgụ ụmụazụ gị mụbaa
Ebe ndị nwere oke ọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ dị elu ka mma na nchọtaengines. Ndị na-eso ụzọ dị oke elu a na-ahụ anya na-anọ na ntanetị mgbasaozi gị, ma ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama nke ndị a na-emekọrịta ma ọ bụ na-ekere òkèụzọ ụfọdụ.
Mkparịta ụka a nwere ike ịbụ na ị na-emegharịghachi ọdịnaya gị,ede ederede na Google ma ọ bụ ọbụna na-ezitere gị tweet..Dị ka ndị dị otú ahụ, hụ na ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ gị na-amụba ngwa ngwa.
# 3: Gbaa mbọ hụ na ọdịnaya gị nwere ike ịkekọrịta ma chọta
Iyi ọha na eze dị ka Pinterest na-eme ka ozi gị dị na yaachọpụta. Ikpo okwu na-akwalite ikere òkè dị mfe. Ntugharị ọrụ nke mmasị ha na mbadamba ha ma kesaa ya na ndị ọzọPinterest fans.
Dị ka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịme ihe ndị ịchọrọ na Facebook nwere ike ịchọengines site na ịga na ntanetịwu nzuzo nzuzo Facebook ma na-enyere ndị ọzọ search engines jikọọ na oge gị.
# 4: Gbaa mbọ hụ na posts gị na-eji Keywords
Keywords dị oké mkpa n'ihi na saịtị gị, mgbasa ozi mgbasa ozi, na blog, wee si otú ahụ,O kwesịghị iju gị anya na isiokwu dị iche iche dị oke mkpa na ọdịnaya gị.
Na Pinterest, ụzọ doro anya ị ga-ebuli n'ọkwá dị mma na engines ọchụchọbụ iji hụ na mbadamba ma ọ bụ atụdo gị nwere isiokwu. N'otu aka ahụ, ịme nyocha maka vidio YouTube nwere ike ime ka okporo ụzọ gaa na blog,ọwa, na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụrụ na etinyere ha na profaịlụ gị.
N'iji isiokwu ndị dị na Facebook mee ihe pụkwara ịba ọkwa dị mma karị.
Isiokwu dị iche iche na-eme ka i nwee ike ịchọpụta ọdịnaya gị na mgbe ndị ọrụ na-achọmaka okwu ndị ahụ, ọdịnaya gị ga-abụ onye mbụ ịpụta.
# 5: Mee ndepụta mpaghara
Gbaa mbọ hụ na atụmatụ gị nwere ndepụta ahaziri iche na Google + nke nwere gịdata na adreesị dị mkpa. Nke a ga - enyere ndị ahịa gị aka nyochaa nzukọ gị ozugbo na Google.
N'iji saịtị dị iche iche na-eme ihe dị ka ahịa ahịa dị egwu, maọ nwere ike ọbụna mekwuo n'ihu site na iji ya mee ka ọ dịkwuo mma SEO.
Onye nwere ike ijide n'aka na ebe nrụọrụ weebụ nwere ike imeziwanye ọnọdụ.